Wakaalada caymiska cafimaadka ee itoobiya ayaa sheegtay in ay iibsan rabto 300 oo mooto - ዜና ከምንጩ
Wakaalada caymiska cafimaadka ee itoobiya ayaa sheegtay in ay iibsan rabto 300 oo mooto
Waxa wargayska addis maleda uu waramay wakalada caymiska cafimaadka ee itoobiya in hawsheeda loogu jiro in 300 oo mooto ah oo ay ku bixin doonaan lacag dhan 60 milyoon oo bir si loo soo iibiyo.
Waxa wakaaladu kale oo ay sheegtay in misaaniyaday lagusoo iibinayo guud ahaan laga helay hayad samo fal ah oo dalka dibadiisa laga leeyahay oo arimaha cafimaadka ka shaqaysa. Waxa la sheegay in wakaaladu ayada oo ka duulaysa waraaqda ay qortay ee iibka in hawshaasi ay dawladu fuliso ah ayaa waxa ay 14kii 2014ka soo saartay ogaysiis beecin ah.
In kasta oo ay ogaysiiskaasi soo bandhigada qiimaha lagu iibsanayo(beecin)ah ee dadka ka qayb qadanaya dalka gudihiisa loo qabtay 15 cisho oo kaliya, hadana madaama ay jiraan qaar dibadaha ka socda oo ka qayb galaya waxa looga dhigay 40 bari in loo baneeyo beecintaasi. Sidaas darteedna waxa soo bandhigida qiimahaasi mootada lagu iibsanayo la furay shalay 26kii bisha tiqimt ee 2014ka. Marka la dhamays tiro beecintaasi ka dibna waxa lagu samayn doona darasaad dhinaca qiimaha ah iyo farsamada. waxaana la sheegay in hawshaasi ay qaadan doonto mudo ilaa bil ah.waxa kale oo la sheegay in marka ay beecidaasi ay dhamaato ay dawladu cidii ku guulaysatay ay kala saxeexan doonaan heeshiis adeeg kala iibsi ah oo marka waraaq loo soo diro wakalada caymiska cafimaadka ee itoobiya ay misaaniyada sii dayn doonto.
Sida xirfadlaha sare oo iibka ah ee wakalada caymiska cafimaadka ee itoobiya mudane Dhaawit Shaarew uu wargayska addis maleda ugu waramay waxa hawsha iibka samayn doona adeega iibka ee dawlada, in kasta oo hawsha beecida kadib geedi socodka iibka la filayo in uu dib uu dhigo sarifka lacagaha dibadahu, waxa la sheegay oo kale in xafiiska adeega iibka ee dawladu uu dhamaystiri doono hawsha geedi socodka iibka ilaa 30ka bisha taahisaas ee 2014ka waxana looga baahan yahay in uu gudoonsiiyo mootooyinkaasi wakaalada caymiska cafimaadka ee itoobiya.
Waxa kale oo uu sheegay in ganacsatada wadanka soo galiya mootoyinkaasi ama kanbaniyad dibadah ee buuxinaya shuruudaha iibkaasi kala iibsigaasiga hawsheeda ay samayn doonaan.
Waxa sida oo kale uu sheegay marka la dhamays tiro hawsha kal iibsiga mootooyinkaasi 300 ah loo qaybin doono xafiisyada wakalada caymiska cafimaadka ee dalka oo dhan ku kal yaala dagmo kasta oo loo adeegsan doono adeega cawimaadka.in kasta oo ay jiraan mootooyin kale oo la soo iibiyay oo loo qaybiyay qaybahaasi, siada uu hadalkiisa ku sheegay Dhaawit Shaarew madaama aan la xalin dhibatada yarida gadiidka ee wakaladaasi ayaa iibka mootooyinkan hada loo sameeyay.
Mootooyinka Yamaha lagu magacaabo looma iibin in magaalooyinka lagu dhax wado ee waxa loo soo iibiyay hawlaha ka baxsan magaalooyinka. Waxa kale oo uu Dhaawit Shaaraw uu sheegay in xaladaha xiligan xaadirka ah ka jira dalka ay adagtahay in misaanada lagu bixinayo hawlahaasi oo kale, balse mustaqbilka waxa wakalada caymiska cafimaadka ee itoobiya ay qorsheesatay in ay iibsato gaadiidka afarta shag ku socda si ay uu yarayso dhibaata dhinaca yarida gaadiidka ka haysata.
Sida warbixinta uu soo saaray xafiiska adeega iibka ee dawlada laga soo ogaaday in mootooyinkaasi 300 ah ee adeega iibka dawladu ugu iibiyay wakalada caymiska cafimaadka ee itoobiya waxa sida oo kale uu soo saaray beecid laba jeer lagu fulinayo oo caalami ah oo 60 mooto loogu iibin doono wasaarada dakhliga oo xiligana lagu jiro iibka dhookmentiga soo ban dhigida qiimaha lagu iibsanayo ee beecida.
Total views : 7512439